ZBN nitrogen generator - China Hangzhou poli Air Nkewa Equipment
Akpụkpọ ahụ ikuku nkewa ngwá
PSA nitrogen oxygen ikuku nkewa ngwá
Oxygen-mma combustion ngwá
Gas ọcha ngwá
Abịakọrọ ikuku ọcha ngwá
Air nkewa ngwa nhọrọ
Ikpe Doziri Products
abịakọrọ ikuku draya
abịakọrọ ikuku nyo
nitrogen ọcha ngwá
ZAJ nyo nwoke ịga ụlọ ọgwụ
ZNH hydrofining ngwá
ZBN PSA nitrogen Ndinam ngwaọrụ
ZMO akpụkpọ ahụ nkewa oxygen ngwá
Ụkpụrụ nke PSA mgbali Ngabiga adsorption nitrogen Ndinam igwe Hangzhou poli ikuku nkewa ngwá n'ichepụta Co., Ltd. dabeere na ụkpụrụ nke mgbali Ngabiga adsorption, iji elu mma carbon molekụla myọ dị ka ihe adsorbent, n'okpuru a ụfọdụ nsogbu, na mmepụta nke nitrogen site ikuku. Mgbe ọcha nke akọrọ abịakọrọ ikuku, nrụgide nke adsorption na desorption na agụụ adsorber. N'ihi na aerodynamic mmetụta, oxygen mgbasa ọnụego na carbon molekụla Sie ...
Ụkpụrụ nke PSA mgbali Ngabiga adsorption nitrogen Ndinam igwe
Hangzhou poli ikuku nkewa ngwá n'ichepụta Co., Ltd. dabeere na ụkpụrụ nke mgbali Ngabiga adsorption, iji elu mma carbon molekụla myọ dị ka ihe adsorbent, n'okpuru a ụfọdụ nsogbu, na mmepụta nke nitrogen site n'ikuku. Mgbe ọcha nke akọrọ abịakọrọ ikuku, nrụgide nke adsorption na desorption na agụụ adsorber. N'ihi na aerodynamic mmetụta, oxygen mgbasa ọnụego na carbon molekụla myọ bụ ọtụtụ ibu karịa na nke nitrogen, na oxygen na-preferentially adsorbed site carbon molekụla myọ, na nitrogen na enriched na gas na-adọ. Ma mgbe ahụ nsogbu ahụ belatara nkịtị nsogbu, na adsorbent e mmasị ka oxygen na ndị ọzọ adịghị. General ntọala usoro abụọ adsorption elu, otu ụlọ elu nke nitrogen adsorption ike, ndị ọzọ ụlọ elu desorption imu, site PLC omume njikwa ịchịkwa gas valvụ oghere na mmechi, nke mere na ụlọ elu abụọ okirikiri, iji nweta na-aga n'ihu mmepụta nke elu-edu nitrogen nzube. The dum usoro mejupụtara ndị na-esonụ components: abịakọrọ ikuku ọcha modul, ikuku nchekwa tank, oxygen nitrogen nkewa ngwaọrụ, nitrogen echekwa tank.
1, abịakọrọ ikuku ọcha mmiri
The ikuku Compressor inye abịakọrọ ikuku akpa-agafe n'ime abịakọrọ ikuku ọcha mmiri, abịakọrọ ikuku si anwụrụ nyo wepụ ọtụtụ ndị mmanụ, mmiri, ájá, na-akpụkọta draya n'ihu mgbakwunye na nke mmiri, ezi nyo mmanụ, ájá, na-agbaso site na àjà ihe ọṅụṅụ nkenke nyo maka miri ọcha. Dị ka usoro ọnọdụ, ikuku nkewa usoro nke ikuku e mere maka a set nke abịakọrọ ikuku mmanụ wepụ ngwaọrụ, nke a na-eji gbochie ekwe omume nke Micro mmanụ penetration na ezu iji chebe maka carbon molekụla sieve. Jighi imewe nke ikuku dị ọcha mmiri iji hụ na ọrụ ndụ nke carbon molekụla sieve. Mgbe a na-emeso site na akụrụngwa, ndị ọcha ikuku nwere ike ji mee ihe maka ngwá ikuku.
22, ikuku nchekwa tank
The ikuku tank bụ iji belata eruba pulsation, echekwa; si otú mbenata nsogbu mmajijiji na usoro, nke mere na abịakọrọ ikuku were were site na abịakọrọ ikuku ọcha mmiri, iji n'ụzọ zuru ezu wepụ mmiri adịghị, belata ụdi PSA oxygen nitrogen nkewa unit ibu. N'otu oge ahụ, na absorption ụlọ elu ka ịgbanwee, ọ na-enyekwa a obere oge ngwa ngwa mbo mbuli maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke abịakọrọ ikuku maka PSA oxygen nitrogen nkewa ngwaọrụ, adsorption ụlọ elu mgbali ngwa ngwa-ebili ka nrụgide ọrụ nke, hụ na ngwá pụrụ ịdabere na na ike ọrụ.
3, oxygen na nitrogen nkewa ngwaọrụ
The adsorption ụlọ elu pụrụ iche carbon molekụla myọ bụ A na B. Mgbe ọcha abịakọrọ ikuku abatakwa A ụlọ elu uzo mmiri na-aga site na carbon molekụla myọ na tinyekwa njedebe, O2, CO2 na H2O bụ adsorbed, na nitrogen gas na-asọpụta si tinyekwa njedebe nke adsorption ụlọ elu. Mgbe oge nke oge, carbon molekụla myọ adsorption ụlọ elu A. N'oge a, A ụlọ elu akpaka stop adsorption, abịakọrọ ikuku eruba n'ime B ụlọ elu maka oxygen mmepụta nke nitrogen, na A ụlọ elu molekụla myọ imu. The imu nke molekụla myọ na-ghọtara site ngwa nrida nke adsorption ụlọ elu na ikuku mgbali wepụ adsorbed O2, CO2 na H2O. Kọlụm abụọ na alternately adsorbed na regenerated mezue nkewa nke oxygen na nitrogen, na-aga n'ihu mmepụta nke nitrogen. The n'elu usoro a na-achịkwa na programmable mgbagha njikwa (PLC). Mgbe tinyekwa ọgwụgwụ nke na-adị ọcha nke nitrogen size set uru, PLC omume, akpaka ekupụ valvụ na meghere, na-erughị eru akpaka nitrogen nsị, hụ na ya erughị eru nitrogen gas anaghị igba. The gas ekupụ mgbe eji na engine mofla mkpọtụ bụ ihe na-erughị 75dBA.
4, nitrogen echekwa tank
The nitrogen echekwa tank na-eji maka guzozie na nsogbu na-adị ọcha nke nitrogen iche na nitrogen oxygen nkewa usoro iji hụ na-aga n'ihu ọkọnọ nke nitrogen mụ. N'otu oge ahụ, na absorption ụlọ elu ka ịgbanwee, ọ ga-onwe ya nke gas na-ana ndị adsorption ụlọ elu, absorption ụlọ elu n'aka enyemaka agbam ume, ma na-ekere òkè ichebe bed, egwu a nnọọ ọrụ dị mkpa na usoro nke inyeaka ngwá ọrụ usoro.
Nka na ụzụ index nke nitrogen Ndinam igwe:
Flow: 3-1000Nm / h Ọcha: 95% -99,9995%
Igirigi uche: erughị -40 DEG C: mgbanwe nrụgide bụ ihe na-erughị 0.6Mpa
Nka na ụzụ e ji mara nke nitrogen Ndinam igwe
1 ezi uche esịtidem mmiri, ikuku nkesa Ime Otu, iji belata mmetụta nke elu na-agba nke ikuku.
2 melite usoro imewe, na ojiji nke nsonaazụ kacha mma.
3 pụrụ iche molekụla myọ nchedo jikoro ịgbatị ndụ nke carbon molekụla sieve.
4 ọgụgụ isi n'ijikọta erughị eru nitrogen gas akụrụngwa iji hụ na ngwaahịa mma.
5 nhọrọ nitrogen eruba ọnụego, akpaka akara usoro, ime akara usoro.
6 mfe iji rụọ ọrụ, anụ ọrụ, elu ogo akpaaka, nwere ike isi nweta unmanned ọrụ.
Akporo nke ngwa nke nitrogen Ndinam igwe:
Metal okpomọkụ omume usoro nke na-echebe gas, nitrogen gas dị iche iche iche nke na tankị, chemical ụlọ ọrụ pipeline gas ọcha, roba, plastic ngwaahịa n'ichepụta, nri ụlọ ọrụ iyuzucha oxygen ọhụrụ-edebe nkwakọ, onunu ụlọ ọrụ na-ekpuchi gas ọcha, ọgwụ ụlọ ọrụ nitrogen nitrogen ebubo nkwakọ na akpa oxygen iyuzucha, electronic components na electronic mmepụta nke okporo ọkụ ụlọ ọrụ usoro na-echebe gas. Na-adị ọcha, eruba na mgbali nwere ike gbanwere izute mkpa nke dị iche iche ahịa.
Previous: VPSA agụụ Oxygen generator
Next: ZBO Oxygen generator
Akpa Natural Gas Generator
anọte Aka Oxygen Generator
Natural Gas Generator Ike Osisi
Osisi Power Generator Natural Gas
Obere gas bara uru Generator
Okwu: No.2, Factory Road, Xindeng Town, Fuyang, Hangzhou, Zhejiang ógbè
Ekwentị: +86 571 6343 0099
VPSA agụụ mgbali Ngabiga adsorption tec ...
Technology nke hydrogen emeputa site m ...
Akọrọ usoro desulphurization technology
Carbon monoxide ọcha technology